JEREMIA 9.1-26	F. 6, 7 | Fitandremana Ankadifotsy
JEREMIA 9.1-26	F. 6, 7
Eto am-boalohany dia alaim-panahy handao ny fireneny Jeremia (1). Eny, noho ny habetsahan’ny faharatsiana dia te hiala amin’izany izy.
Alahelon’ny mpaminany.Tsy miraharaha an’Andriamanitra ny vahoaka ary tsy mahay manavaka ny tsara amin’ny ratsy, milentika hatrany amin’ny faharatsiana : lela mandainga, hery avy amin’ny tsi-fahamarinana, tsy fahalalana an’Andriamanitra, mamadika ny namany, mamitaka (2-5). Tsy izany koa ve no hitantsika eo amin’ny firenentsika ? Miteraka alahelo ao anatintsika koa ve ny fahitàna izany fiainana manao tsinontsinona an’Andriamanitra izany ?
Miteraka zava-doza ny tsi-fahatahorana an’Andriamanitra. Very hevitra izay mijery ny fahavoazana (9-10), ary manontany ny anton’izany (11). Rehefa tsy misy intsony ny fahatahorana an’Andriamanitra dia ny fandringanana sy ny loza no fitaovana ampiasainy mba hiverenan’ny olona amin’ny fibebahana (12-15). Saingy maro no tsy mahatakatra izany fahamarinana izany eo anatrehan’ny tondran-drano, ny horohorontany, ny ady sy ny herisetra izay mitranga maneran- tany. Mitady antony ara-tsiansa hatrany ra- olombelona mba tsy hiheverana an’Andriamanitra. Nefa ny fifandraisana ratsy amin’Andriamanitra izay hitoerantsika no anton’ny loza sy fahoriana voalohany indrindra !
Fahendrena (22-23). Voa-janahary ao anatin’ny olombelona ny mirehareha noho ny zava-bitany, na izay ananany sy ny fahombiazany, fa mampianatra antsika Andriamanitra fa ny tena fahendrena dia ny fahalalana Azy. Mba hamerenana ny fifandraisana amin’Andriamanitra indray dia ilaina ny fanekena ny Teniny, mariky ny famoràna marina, dia ny famoràna ny fo (24).
Vavaka : Tompo o, omeo anay ny fahiratana hahatakatra ny hafatrao ao anatin’ny zava- mitranga eto amin’ity izao tontolo izao ho rava ity. Amena.